Homo nna ochie: njirimara, mmalite na mmalite | Netwọk Mgbasa Ozi
Homo onye nna ochie
Na mgbanwe nke mmadụ dika anyị si mara ya taa, enweela ọtụtụ ụdị. Otu n'ime ha bụ Homo onye nna ochie. Ọ bụ ụdị nke anwụrụ ma ọ bụ nke genus Homo ma were ya dị ka otu n'ime omume mbụ na nke kacha ochie na Europe. Dika nkpuru-obi nke fosusu ndi mmadu choputara, amatara na o di ihe dika nari puku nari iteghete gara aga.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mbido na mmalite nke Homo onye nna ochie.
2 Mgbasa Hominid na Homo onye nna ochie
3 Myirịta dị n'etiti Homo na nna ochie Homo sapiens
Ọ bụ ụdị nke mmadụ na usoro mmalite dị n'etiti Homo heidelbergensis na homo neanderthalensis. O bu hominid mbu biri na Europe ma burukwa Africa. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọkà mmụta sayensị niile na-eche na ọ bụ ebe obibi nke mmadụ na mbugharị na-aga n'otu oge na Europe na Asia. Ọ na-eme atụmatụ na na ihe nke geological oge omume n'oge Pleistocene ala. Fọdụ atụmatụ nke ụdị a bụ ihe mgbe ochie na ndị ọzọ nwere ọgbara ọhụụ. Nke a na-ekpebi na ọ bụ ngwakọta mgbanwe maka mgbanwe na mgbanwe nke mmadụ.
Ebe mbu nke ozu ndi a bu nke di na obodo Ceprano nke di na Italytali. Site na ya ọ ghọrọ aha ama ama nwoke Ceprano. Isi mpempe akwụkwọ nke foduru nke a mụworo n’ihe omimi ka ukwuu bụ nke okpokoro isi nwere àgwà ndị dị n’oge gboo na nke oge a. Fọdụ n’ime ihe ndị sayensị chọpụtara na ọ tụrụ afọ ole okpokoro isi a bụ ọ bụ ihe dị ka narị puku itoolu narị puku. Nyere na o nwere ọdịdị phylogenetic dị iche iche, usoro oge na nka ihe ochie dị ka nke ụdị ndị ọzọ, akpọrọ ya aha onye nyocha ma ọ bụ ọsụ ụzọ.
Ihe foduru nke e chebere n'ọnọdụ ndị ka mma bụ agba elu na ọkpọ ihu nke onye na-eto eto nke ndụ ya mgbe ọ nwụsịrị a na-eme atụmatụ na o mere n'ihe dịka afọ 11. N'otu ebe enwere ike ịchọta ihe ndị a, naanị ole na ole ngwa ọrụ okwute na ọtụtụ anụ anụmanụ ka a gụrụ. Nke a na-egosi na mmadụ a enweworị ike ịrụ ọrụ. Otu ihe ahụ na-eme na homo neanderthalensis ma ọ bụ Homo habilis.
Ọ bụ ezie na amaara ya na ọkpụkpụ ndị a na ihe niile fọdụrụnụ bụ n'ihi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nde afọ gara aga, ọ dị oke ọnụ iji nwee ike igosipụta ọdịiche dị n'etiti ha. Ọ bụkwa na akụkụ ahụ ọ bụla na mmewere ya kwekọrọ na ndị dị iche iche n’afọ ndụ.
Hominid mmeba na Homo onye nna ochie
Ihe a pụrụ ikweta bụ na ihe ndị ahụ e kere eke nwere ihe ụfọdụ ha na-ekwu. Ma enwere ihe niile sitere na ndị ochie hominid ndị biri n'Africa na ụfọdụ ndị kwagalarị Europe. N'ime njirimara anụ ahụ na nke ndu nke ụdị a, anyị na-ahụ ngwakọta na okpokoro isi ya na ezé na obere agba nke dị iche na fosil ndị ọzọ nke genus Homo. Fọdụ n’ime ndị fọrọ afọ yiri nke a n’ụdị ụmụ mmadụ na ụmụ mmadụ n’oge a, ma nwee ihu gbasiri ike karị. Ogologo bụ nkezi nke na-esi na 1.6-1.8 mita, nke na-adịghị agafe ugbu a Ndị ọzọ. Ibu ibu nke ndị a ruru ihe dị ka n'agbata kilogram 65 na 90, ya mere o yiri nke dị ugbu a.
Okpokoro isi nwere ụfọdụ nchịkọta nke atụmatụ nke oge a na nke oge ochie. N'etiti ihe ndị kachasị ọhụrụ, canos fossa, oghere ndị na-emechi oghere na imi na-apụta. Akụkụ ndị a na-enye ọdịdị dịtụ karịa karịa ọdịiche ahụ na ụdị ndị ọzọ ochie. N'aka nke ozo, oburu na anyi enyochaa ihe ndi ochie, anyi ga-ahu na o nwere obere ọkpọiso ya na onu ogugu ihu ya. Oultimital vault ya pụtakwara nke ọma, ọkachasị n'azụ okpokoro isi.
Banyere oke ụbụrụ, ọ pere mpe karịa mmadụ ugbu a. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu ọdịiche, ọ nwere ikike dịtụ ala karịa ogo ugbu a. Primkpụrụ eze oge ochie pụtara maka inwe ụfọdụ ezé siri ike na premolars nwere ọtụtụ mgbọrọgwụ mgbatị na-arụ ọrụ ka mma nri. Njirimara ndị a na-ewere dị ka nke oge a gbasara ọnụ metụtara canines. Ọzọkwa, ụfọdụ ezé ihu nwere ike ịdị iche ebe ọ bụ na a na-ahụ ha na obere nha ma e jiri ya tụnyere ụdị anụ ọhịa ndị ọzọ.
Achọpụtala ụdị nsị nke ezé yiri ụmụ mmadụ nke oge a. Mkpebi ndị a na-eduga na-ekwu na hominids ndị a nwere otu ụdị mmepe n'ihe gbasara ezé.
Myirịta dị n'etiti Homo onye nna ochie na Ndị ọzọ
Anyị ga-enyocha nke bụ isi njirimara nke yiri ya na ụdị abụọ ahụ. Maka nke a, anyị kwesịrị ịtụle ngụkọta nke ndị otu a. Na Homo onye nna ochie Ọ bụ otu n'ime ụdị nwere myirịta dị ukwuu na mmadụ dị ugbu a. Ihe mbu anyi aghaghi ileba anya na ntughari bu uto ya. O bu udiri uto dika nke anyi. Oge nke nwata na oge uto gafere nwayọ nwayọ karịa n'ụdị ndị ọzọ. Na ụdị anyị anyi nwere oge toro eto ma oburu na ayi tulee ya dika oge nke ndu ayi.
Njirimara nke ụdị a ga-abụ ngwakọta n'etiti ihe ochie na nke oge a. Enwere nkọwa dị omimi banyere ụdị a na nke ahụ bụ na e lere ya anya dị ka ihe ndozi. Tupu ụdị a, ndị ọzọ hominids dị egwu ma ọ bụ opekata mpe, ha enweghị oke njiri iji otu akụkụ aka karịa.
Akụkụ ọzọ anyị nwere ike iji tụnyere na nke nwere oke njirimara bụ nku anya na ọkpọiso. Ọ bụrụ na anyị atụlee nku anya na ọkpọiso nke Homo onye nna ochie nke mmadu di ugbu a anyi huru na o yiri ya. Agbanyeghị, enwere ike ịchọta àgwà ndị a na ụdị ọzọ sitere na ngalaba ọzọ dị iche iche.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Homo onye nna ochie na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Homo onye nna ochie